Vaovao - Ny tantaran'ny asidra amine
1.Ny fahitana asidra amine
Ny nahitana asidra amine dia nanomboka tany Frantsa tamin'ny 1806, rehefa nanasaraka fitambarana asparagus (fantatra amin'ny anarana hoe asparagine) ny mpahay simia Louis Nicolas Vauquelin sy Pierre Jean Robiquet, izay no fantatra fa asidra amine voalohany. Ary io zavatra hita io dia nampipoitra avy hatrany ny fahalianan'ny fiarahamonina siantifika tamin'ny singa iray manontolo amin'ny fiainana, ary nanosika ny olona hitady asidra amine hafa.
Tao anatin'ny folo taona manaraka dia nahita kista (1810) sy cysteine ​​monomerika (1884) tao anaty vato voa ny mpahay simia. Tamin'ny 1820, ny mpahay simia dia nanala ny leucine (iray amin'ireo asidra amine manan-danja indrindra) sy glycine amin'ny tavy hozatra. Noho io fahitana io amin'ny hozatra, ny leucine, miaraka amin'ny valine sy isoleucine, dia raisina ho asidra amine ilaina amin'ny synthesie proteinina hozatra. Tamin'ny 1935, ireo asidra amine 20 mahazatra dia hita sy voasokajy avokoa, izay nanosika ilay biokimia sy mpahay sakafo William Cumming Rose (William Cumming Rose) hamantatra tsara ny fepetra ilaina amin'ny asidra amino isan'andro farafahakeliny. Nanomboka teo, ny asidra amine dia nanjary ifantohan'ny indostrian'ny fitomboana haingana.
2.Ny maha-zava-dehibe ny asidra amine
Ny asidra amino dia manondro betsaka ny fitambarana organika izay misy vondrona amino fototra sy vondrona karboksil asidra, ary manondro ny singa ara-drafitra izay misy proteinina. Ao amin'ny tontolo biolojika, ny asidra amine izay mandrafitra ny proteinina voajanahary dia manana ny mampiavaka azy manokana.
Raha fintinina dia ilaina amin'ny fianan'ny olombelona ny asidra amine. Rehefa tsy mifantoka afa-tsy amin'ny hypertrophy hozatra isika, fahazoana tanjaka, fifehezana fanatanjahan-tena ary fanatanjahan-tena sy fanarenana aerobika dia afaka mahita ny tombony azo avy amin'ny asidra amine. Tao anatin'izay folo taona lasa izay, ny biokimia dia nahavita nanasokajy tsara ny firafitra sy ny fitovian'ny fitambaran'ny vatan'olombelona, ​​ao anatin'izany ny rano 60%, 20% proteinina (asidra amine), tavy 15% ary gliosida 5% ary zavatra hafa. Ny filan'ny asidra amine ilaina ho an'ny lehibe dia manodidina ny 20% ka hatramin'ny 37% amin'ny filan'ny proteinina.
3. Ny vinan'ny asidra amine
Amin'ny ho avy, ny mpikaroka dia hanohy hamoaka ny zava-miafina amin'ireo singa velona ireo mba hamaritana fa tafiditra ao anatin'ny dingana rehetra mifandraika amin'ny vatan'olombelona izy ireo.